बिहानबिहानै खाली पेट बेसारपानी पिउनुका फाइदाका बारेमा धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ । केही मानिस त खाली पेटमा मह र कागती हालेको पानी पनि पिउँछन् । यसो गर्दा पेटको समस्या निको हुन्छ अनि मोटोपन पनि हुन पाउँदैन । अनि यसमा बेसार मिसाएर पिउँदा शरीरमा भएका विषालु पदार्थ पनि निस्कन्छ । पिउने तरिका एक गिलास मनतातो पानीमा आधी चम्चा कागतीको रस, मह र[Read More…]
by GreenKhabar —	April 19, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, स्वास्थ्य, हरित खबर
भुटेको मकैका फाइदा
तपाई हामीमध्ये कतिपय भुटेका मकैका पारखी छौँ होला । भुटेको मकैको स्वास्थ्यमा विशेष फाइदा गर्छ । यी हुन भुटेका मकैका फाईदाः १. भुटेको मकैमा फाईबरको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । यसले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ । भुटेको मकै खाने मानिसलाई एसिडिटी र कब्जियतको कहिल्यै समस्या हुदैन् । २. भुटेको मकैमा आइरन, कपर, र फस्फोरस र म्याग्नेसियमको मात्रा प्रर्याप्त हुने भएकोले शरिरमा[Read More…]
by GreenKhabar —	March 29, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, स्वास्थ्य, हरित खबर